May 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
by MM Book City · Published May 17, 2018
“Today’s lesson” ဒီ​နေ့အတွက်​ သင်​ခန်းစာ
~~~~~~~~~~~~~~~ All students laughed when the teacher wroteawrong answer on the blackboard, but never expected him to do this next. သင်​ပုန်းကြီး​ပေါ်မှာ ဆရာက အ​ဖြေမှား​ရေးမိ​တော့ တပည့်​​တွေအားလုံး ဟားတိုက်​ရယ်​ကြကုန်​တယ်​.. .ဒါ​ပေမဲ့ ​နောက်​တခါဒီလိုမျိုး ထပ်​မမှားဖို့က​တော့ သူတို့​မျှော်​လင့်​ကြတာ​ပေါ့​။ One day a...
ပညာတတ်များ မေ့လျော့နေသော အမှန်တရားများ
၁။ မည်မျှပင် ပညာတတ်မြောက် ပြီး၊ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားပါစေ လက် တွေ့ လုပ်ဆောင်ချက် မရှိလျှင် မည့်သည့်အရာကိုမျှ အောင်မြင်ပြီး မြောက်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင် ချေ။ ပညာတတ်များအနေဖြင့် လက်တွေ့နှင့်စာတွေ့ကို ပေါင်းစပ် မှုမရှိလျှင် မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းကို သတိပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သင်ယူ ထားသည့်ပညာရပ်ကို လက်တွေ့နယ် ပယ်တွင် ပေါင်းစပ်အသုံးမချနိုင်လျှင် ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိသူသာ ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ် ပညာတတ်မြောက် သူအဖြစ် မခေါ်ဆိုနိုင်ပေ။ ၂။ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်...
ဘဝမှာ မသက်​ဆိုင်​ပါဘူးဆိုပြီး စွန့်​ပစ်​ခဲ့တဲ့အရာ​တွေက အ​ရေးကြုံချိန်​မှာ လိုအပ်​လာတတ်​တယ်​ ကိုယ့်​ကို လာချစ်​တဲ့သူကို ပြန်​မချစ်​နိုင်​ရင်​​တောင်​ မုန်းဖို့ ဘယ်​​တော့မှ မစဉ်းစားမိ​စေနဲ့ ဘဝဆိုတာ… အမုန်း​တရား​တွေနဲ့ အထာမကျဘူးအများအမြင်​မှာ အမှန်​တရားဆိုတာ ခါး​နေတတ်​တယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ ခါး​နေတဲ့ ​ဆေးတစ်​ခွက်​ကို မ​သောက်​ဖြစ်​ရင်​ ​ရောဂါဆိုတာ ဘယ်​​ပျောက်​ဖြစ်​မလဲ ကိုယ်​မမှားဖို့ပဲ အ​ရေးကြီးတယ်​​လေ လူဆိုတာ… အမြဲတမ်း မမှန်​နိုင်​​ပေမယ့်​ မှားခြင်းသ​ဘော​တွေနဲ့လည်း ​နေသားကျဖို့မသင့်​ဘူး အမှန်​တရားအတွက်​နဲ့လည်း တွန်းလှန်​နိုင်​ရမယ်​ အမှား​တွေအတွက်​လည်း ဝန်​ခံရဲရမယ်​ ဘဝရှိလာရင်​...
by MM Book City · Published May 17, 2018 · Last modified December 18, 2018
ခေတ်ပညာတက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ ။ သူမှာတက်သင့်တက်ထိုက်တဲ့ပညာတွေအားလုံး သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်ကို ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့…။ အဲဒီလိုစိတ်ကူးပြီး အလုပ်လိုက်ရှာလိုက်တာ ဘယ်မှာမှ မရပဲ ရက်တွေလတွေကြာလာခဲ့တယ်..တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ အဲ့ဒီလူငယ်လေးက စိတ်ညစ်ပြီး ငါလိုအသုံးမကျတဲ့သူ သေသွားတာမှ ကောင်းဦးမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး ကိုယ်ကိုယ်ကို သတ်သေမယ် ဆိုပြီး မြစ်ထဲကို အဆုံးစီရင်ဖို့သွားတယ်တဲ့… အဲ…ဖြစ်ချင်တော့ သူသက်သေမဲ့ မြစ်ကမ်းနားမှာ ငါးမျှားနေတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦး ရှိနေတယ်…။ အဖိုးအိုက ဒီလူငယ်လေးဘာလုပ်မလဲလို့ ငါးမျှားရင်းစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့…။...
ဒီစာကိုမရေးခင် စာရေးသူအနေနဲ့ ၀န်ခံရမည်မှာ စာရေးသူ၏အမ၀မ်းကွဲ ပေးပို့ပေးသော စာရေးဆရာ Burke Hedges ရေသားပြီးအရောင်းရဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Parable of the Pipeline မှ Pablo and Bruno သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုကိုးကားပြီးရေးသားပေးတာဖြစ်ပါတယ် လူတိုင်းလူတိုင် မှာအိမ်မက်တွေကိုယ်စီရှိကြတယ် အချို့ ကတော့ အိမ်မက်တွေလက်တွေ့ဖြစ်လာပြီး အချို့ကတော့အိမ်မက် ကိုတကယ့်တမ်းအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ကြပဲအလုပ်အတွက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးအလုပ်နဲ့ပဲဘ၀တွေပြီးဆုံး သွားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီပုံပြင်လေးကစာဖတ်သူတို့အတွက် စိတ်ခွန်အားအလင်းလေးရပါစေလို့မျှော်လင့်၍ရေး သားပေးတာဖြစ်ပါတယ် စာပါအကြောင်းအရာများအားနည်းချက်ရှိပါကစာရေးသူရဲ့အားနည်းချက်သာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါရစေ… ပညာပေးပုံပြင်ကစပါပြီ တစ်ခါက...
ကမ္ဘာကျော်ဇာတ်ကားများ၏ မှတ်သားဖွယ်ရာ ဒိုင်ယာလောခ့်များ
လုပ်မယ်ဆိုလုပ် မလုပ်ဘူးဆိုရင် မလုပ်နဲ့ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာ မရှိဘူး -Yoda- (Star War) ဘဝဆိုတာ တိုတောင်းလွန်းတယ်။ ခဏလောက်ရပ်တန့်ပြီး ဘေးဘီကို မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကို သိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ -Ferris Bueller- (Ferris Bueller’s Day Off) အခက်အခဲတွေကြားက ပွင့်လာတဲ့ပန်းဟာ အားလုံးထဲမှာ အရှားပါးဆုံးနဲ့ အလှပဆုံးပန်းပဲ။ – Mulan – ငါတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာက ငါတို့ကိုပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာပဲ။ -Gandalf- (Lord...
ပြောင်းလဲချင်သူ အောင်မြင်ချင်သူများအတွက် ဘ၀ ရဲ့ မိုင်တိုင်များ
သိမ်းထားသင့်တဲ့ အဖိုးတန် ဆိုစကားများ * မိုက်ခရိုဆော့ဖ် အိုင်တီသူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ် ခင်ဗျားသာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ရင် အဲဒါ ခင်ဗျား အမှား မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ချို့ ချို့ တဲ့တဲ့နဲ့ သေသွားရင်တော့ ခင်ဗျား အပြစ်ပဲနော်။ *** * သူတော်စင် ၀ိဝေကနန္ဒ တကယ်လို့ နေ့တစ်နေ့အတွင်းမှာ ပြဿနာ တစုံတရာကို သင်မကြုံခဲ့ရသေးဘူး ဆိုရင် သင် လမ်းမှားပေါ် လျှောက်...
နာရီကြော်ငြာတွေမှာပါတဲ့ နာရီတွေ အားလုံးက ဘာဖြစ်လို့ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်ကိုပဲ ပြနေရတာလဲ?
နာရီကြော်ငြာအားလုံးနီးပါးမှာ နာရီလက်တံတွေက ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ်ကိုပဲ ချိန်ညှိထားတာကို သင်တို့ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီလို ချိန်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှန်းဆချက်တွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့က အေဗရာဟမ်လင်ကွန်း၊ ကနေဒီနဲ့ မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာတို့ လုပ်ကြံခံရတဲ့ အချိန်တွေကို မှတ်မိအောင် လုပ်ထားတယ်လို့ ဆိုကြပြီး တချို့ ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ် အနုမြူဗုံးကြဲချတဲ့အချိန်ကို ညွှန်းဆိုထားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်...
လူတွေရဲ့တစ်နေ့တာမှာ ပျော်ရတဲ့အချိန်၊ စိတ်ညစ်ရတဲ့အချိန်တွေ ရောထွေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကတော့ ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ရက်နဲ့ ပူဆွေးသောကရောက်ရတာတွေ၊ ဝမ်းနည်းနေရတာတွေကို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
တစ်နေ့တွင် အမတ်ကြီးတို့ရဲ့ နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသံတမန်များရောက်လာကြလေသည်။နိုင်ငံခြားသံတမန်များသည် နန်းတွင်းထဲသို့အခစားဝင်ကြပြီးလိုက်လံကြည့်ရှုကြလေသည်။ထိုထဲတွင် လူငယ်တစ်ဦးလဲပါလေသည်။အမတ်ကြီးနှင့် ဘုရင့်သားလဲ ထိုနိုင်ငံသားများကို ဧည့်ခံနေကြသည်။ ထိုစဉ်လူငယ်တစ်ဦးက အမတ်ကြီးနားလာပြီးတော့ ” အမတ်ကြီး၏ ပညာကြီးမှုကို အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှာ ဂုဏ်သတင်းမွှေးပျံ့လှပါသည်။အမတ်ကြီးကို မေးစရာတစ်ခုရှိပါသည်။ အမတ်ကြီးခွင့်ပြုပါ” အမတ်ကြီးက ခေါင်းညိတ်လိုက်၏။ ” အမတ်ကြီးမည်သို့သော အလုပ်မျိုးသည် စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ရာထူးဂုဏ်သိမ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတို့ကိုလည်းကောင်း ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သနည်း” အမတ်ကြီးက ” အသင်လုလင် အသင့်ကို ကျွန်တော် အလုပ်တစ်ခုခိုင်းပါမည်။ ထိုအလုပ်ကိုအရင် လုပ်ကြည့်ပါလော့”ဟုပြောကာ...